सुत्ने समयमा युवतीहरुको मनमा खेल्छन् यस्ता कुरा, जान्न्ुस – Online Khabar 24
सुत्ने समयमा युवतीहरुको मनमा खेल्छन् यस्ता कुरा, जान्न्ुस
राति सुत्ने समयमा हरेक व्यक्तिको दिमागमा हरेक कुरा खेलिरहेको हुन्छ। पुरुषको दिमागमा खेल्ने कुरा र महिलाको दिमागमा खेल्ने कुरामा भने धेरै भिन्नता रहने गर्छ।
राति सुत्ने समयमा दिमागमा भिन्न-भिन्न प्रकारका कुरा खेल्नुलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । महिलाहरु अथवा युवतीहरु राति सुत्ने समयमा के सोच्ने गर्छन् त ? हेर्नुहोस्:
सुत्नु भन्दा पहिला युवतीहरु आफ्नो सुन्दरताको बारेमा सोच्ने गर्छन्। सुन्दरतामा केहि कमि त भएन भन्ने चिन्ता युवतीहरुलाई प्राय हुने गर्छ। युवतीहरु सुत्ने समयमा दीउसो भएका सम्पूर्ण घटनाक्रमका बारेमा समेत सोच्ने गरेका छन्। कसैले आफुलाई नोटिस गर्यो कि गरेन भन्ने विषयमा समेत युवतीहरु एक पटक बेलुका सोच्ने गर्छन्।
यदि कोहि युवती प्रेम सम्बन्धमा रहेको अवस्थामहने बेलुका सुत्ने समयमा आफ्नो परेको बारेमा गहिरो रुपमा सोचेर मात्रै सुत्ने गर्छन्।
युवतीहरु प्राय बेलुका सुत्ने समयमा धेरै प्रकारका कुराहरु सुचेरा मात्रै सुत्ने गर्छन्। यदि कोहि युवकले प्रेम प्रस्ताव राखेमा पनि युवतीहरुले बेलुका सुत्ने समयमा धेरै गहिरिएर सोच्ने गर्नेका हुन्छन्। यदि कोहि युवतीलाई कोहि युवक मन पर्ने गर्छ भने बेलुका सुत्ने समयमा त्यस युवकलाई जरुर सोचेर मात्रै निदाउने गर्छन्।
अचम्म लाग्ने तथ्य,युवतीहरु सुत्ने समयमा कस्तो कपडा लगाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै सोच्ने गर्छन्। साथै भोलिको दिन पनि के कपडा लगाउने भन्ने विषयले युवतीहरुलाई राति धेरै सताउने गर्छ।
हरेक ठाउँमा कस्तो रुपले प्रस्तुत हुने भन्ने विषयले हरेक युवतीहरुलाई रातको समयमा धेरैनै सताउने गरेको हुन्छ। आफु अरु भन्दा फरक देखिने विषयमा युवतीहरु धेरै चिन्तित रहने हुँदा राति सुत्ने समयमा धेरै सोच्ने गर्छन्। साथै सुत्ने समयमा युवतीहरुले समाजका बारेमा पनिसोचने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
समाजमा आफुलाई कस्तो नजरमा हेरिने गरिन्छ भन्ने सोचेर युवतीहरु तनावमा रहने गर्छन्। साथै हरेक युवतीले आफ्नो सपनामा सपनाको राजकुमार देखियोस भन्ने सोचेर मात्रै निदाउने गर्छन्।
बिगुल न्युजबाट साभार गरियको
Prevकुन कम्पनिको आईपीओ खुल्दैछ? कहिलेबाट खुल्छ? [ हेर्नुहोस-मिति सहित]
nextतपाँर्इ लार्इ थाहा छ? कागती पानीले हा’नी पनि गर्छ जान्नुस कसरी